Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) - APICMO ဒြပ်ပေါင်းများ
ထုတ်ကုန်များ > Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9)
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) ကဗီဒီယို
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် reactions.Cyclopropylboronic အက်ဆစ်နားဆက်မှီရာတွင် anhydride ၏ကွဲပြားပမာဏပါဝင်ပါတယ်လေ့အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာဆူဇူကီးအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ organoboronic အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဓါတ်ကူပစ္စည်း·အတှကျအသုံးပွု; မိုက်ခရိုဝေ့-ကူညီကြေးနီ (II ကို) N-cyclopropylation1 -catalyzed ·; Nickel- နှင့် arenes2 ၏ကြေးနီ-catalyzed ဆူဇူကီး-Miyaura နားချင်းဆက်မှီတုံ့ပြန်မှု·; cyclopropylboronic acid3 နှင့်အတူ aryl halides ၏ Palladacycle-catalyzed ဆူဇူကီး-လက်ဝါးကပ်တိုင်နားချင်းဆက်မှီ·; ပယ်လေဒီယမ် (0) · cyclopropane CH နှောင်ကြိုး functionalization4 -catalyzed; ပယ်လေဒီယမ်-catalyzed decarboxylative coupling5 ·; cyclopropanes6 ၏ပယ်လေဒီယမ်-catalyzed ligand-ညွှန်ကြား oxidative function ·; ပယ်လေဒီယမ်-catalyzed
SuSimple propargylic silyl အီတစ်ခုအကျိုးရှိစွာတအိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရရှုပ်ထွေးတဲ့ cyclopropylboronic အက်ဆစ် pinacol Ester ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ terminal အက်စီတလင်းတစ် Schwartz ရဲ့ဓါတ်ကူပစ္စည်း catalyzed hydroboration ခံယူ; နောက်ထပ် Schwartz ရဲ့ဓါတ်ကူပစ္စည်းနှင့်အိမ်နီးချင်း silyl အီ၏ Lewis ကအက်ဆစ်-mediated activation ၏နောက်ဆက်တွဲဖြည့်စွက် cyclization cyclopropylboronic အက်ဆစ် pinacol Ester တစ်အကွာအဝေးဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါနယ်ပယ်မွှေးကြိုင်, aliphatic, Quaternary နှင့်·၏အဘိတ်မှာအသုံးပြုတဲ့ခဲကဲ့သို့အစားထိုး cyclopropyl aryl products.zuki နားချင်းဆက်မှီ reaction7Reagent တစ်အကွာအဝေးသို့နားဆက်မှီရာတွင်ဆူဇူကီးကနေတဆင့်အသွင်ပြောင်းနိုင်သည့် spiro အစားထိုး cyclopropyl ကွင်း, ပါဝင်သည်; arylation အားဖြင့် Diaryl ketones ။
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL နံပါတ် MFCD04038750
InChI Key ကို WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း Cyclopropylboronic အက်ဆစ်
အနီအောက်ရောင်ခြည် Spectrum စစ်မှန်သော
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Form ကို Powder
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 85.897
အပြုံး B က (C1CC1) (O) အို
90 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှပွိုင့် 95 °အရည်ပျော်
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
(411235-57-9) GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် GHS P ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အကာအကွယ်လက်အိတ် / အကာအကွယ်အဝတ်အစား / မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး / မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝတ်ဆင်။
မျက်လုံးများလျှင်: မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ရေနှင့်အတူသတိဆေး။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူလျှင်, မျက်ကပ်မှန်ဖယ်ရှားပါ။ လက်မဆေး Continue ။
ရှိုက် IF: လတ်ဆတ်သောလေကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်အသက်ရှူဘို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတွင်ကြွင်းသောအရာမှာစောင့်ရှောက်လော့။
/ အမျိုးသားရေး / ဒေသဆိုင်ရာ / ဒေသခံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရဲ့ contents / ကွန်တိန်နာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
သတိပေးချက်: အကြံပြုသိုလှောင်မှု: -30 °° C မှ -10 မှ
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) ဆောင်းပါးများ
one-Pot, ဒြပ် Tractable Propargylic Silyl အီထံမှ Cyclopropylboronic အက်ဆစ် Pinacol Ester သုံးခု-အဆင့် Synthesis
SuSimple propargylic silyl အီတစ်ခုအကျိုးရှိစွာတအိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရရှုပ်ထွေးတဲ့ cyclopropylboronic အက်ဆစ် pinacol Ester ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ... ။
အော်ဂဲနစ်ပေးစာ 2017 vol ။ 19 # 14 စ။ 3891 - 3894
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် 411235-57-9
Cyclopropylboronic အက်ဆစ်လေ့အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာဆူဇူကီးနားချင်းဆက်မှီတုံ့ပြန်မှုများတွင်အသုံးပြုထားတဲ့ organoboronic အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ...
1 ။ ဂျေ Am ။ Chem ။ Soc ။ 128, 12634, (2006)
2 ။ Benard S ကို .; Neuville, L ကို .; Zhu, JJ Org ။ Chem ။ 73, 6441, (2008)
3 ။ Tetrahedron လက်တ။ 43, 6987-6990, (2002)
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
သင့်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သုတေသန application များအတွက်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏလိုအပ်ပါတယ်
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9)
ကဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်မှကြွလာနှင့်ဤ Cyclopropylboronic အက်ဆစ်များပါဝင်သည်သည့်အခါ Apicmo တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။
ဤသည် organiboronic အက်ဆစ်က anhydride တစ်ဦးကွဲပြားငွေပမာဏပါရှိသည်ဆူဇူကီးနားချင်းဆက်မှီတုံ့ပြန်မှုအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ကူညီကြေးနီ (II ကို) - catalyzed
Pallazium ligand တိုက်ရိုက် oxidative ဓါတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည် catalyzed
Xantphos နှင့် Cu (OTf) က catalyzed aratic aldehydes အတူ ryboronic အက်ဆစ် '' arylation အားဖြင့် Diaryl ketones
ရောင်ရမ်းရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင်အသုံးပြု TACE inhibitors အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
အဘယ်သူမျှမ CAS 411235-57-9
ဓာတုနာမကိုအမှီ Cyclopropylboronic အက်ဆစ်
သိပ်သည်းဆပါ g / cm3 1.11g / cm3
IUPAC က NAME cyclopropylboronic အက်ဆစ်
ရေဆူမှတ် 205.1mmHg မှာ760ºC
အရည်ပျော်မှတ် 90-95 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
နာမ် AKOS BRN-0457
boron အက်ဆစ်, cyclopropyl
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် 95%
အဆိုပါ cyclopropylboronic အက်ဆစ်ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် 411235-57-9 တွက်ချက်ဂုဏ်သတ္တိများ
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 6
အတိအကျ Mass 86.054g / mol
Monoisotopic Mass 86.054g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 40.5 တစ် ^ 2
မော်လီကျူးအလေးချိန် 85.897 g / mol
ဒီထုတ်ကုန်ဆူဇူကီးနားချင်းဆက်မှီတုံ့ပြန်မှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်အရာတခု organoboronic အက်ဆစ်အဖြစ်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။
signal စကားလုံး: အန္တရာယ်
ဒီဓာတုကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာသင်အမြဲ cyclopropylboronic အက်ဆစ်သို့မဟုတ်ဓာတ်များနှင့်အတူမည်သည့်မတော်တဆအဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်အကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာထိုကဲ့သို့သောလက်အိတ်အဖြစ်ဂီယာတစ်ဦးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့် impervious ဖိနပ်ဝတ်ဆင်။ သင့်ရဲ့ facemask ပိုမိုလွယ်ကူအသက်ရှူဘို့သန့်စင်ခြင်းနှင့်လေထု filter များနှင့်အတူအပြည့်အဝ-အသက်ရှူကိရိယာတပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
1. Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှု
သင့်ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းလျစ်လျူရှုဘယ်တော့မှမ။ ထိုသို့သောအငွေ့ပါးပျဉ်း, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းတစ်ခုမီးသတ်ဘူး, ပရိသတ်တွေ, အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်နှင့်လေထုသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်အားလုံးလိုအပ်သောအရေးပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်အတူကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမတော်တဆ Cyclopropylboronic အက်ဆစ်အငွေ့ inhales လျှင်, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့ပွင့်လင်းသောဧရိယာသို့မဟုတ်အလုံအလောက်လေဝင်လေထွက်နှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာပေးဖို့သားကောင်လွှဲပြောင်းရပါမည်။ တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအသက်ရှူအခက်အခဲများအဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြုံနေရလျှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများရတဲ့မတိုင်မီအတုအောက်စီဂျင်ထောက်ခံမှုစီမံခန့်ခွဲစမ်းပါ။
ဓာတုအရေပြား ino နက်ရှိုင်းသောစိမ့်ဝင်သွားတယ်မတိုင်မီထိုခဏခြင်းတွင်သန့်ရှင်းသောရေနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်ငါးမိနစ်အဘို့အပျော့ဆပ်ပြာတွေအများကြီးနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့သုတ်ခြင်း။ သင်၏အဝတ်လည်း spillage တယ်ဆိုလျှင်, သူတို့ကိုပယ် ယူ. reusing ရှေ့တော်၌ဆေးကြောဖို့သေချာပါစေ။ သငျသညျနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်လာခြင်း၏မည်သည့်ဆိုင်းဘုတ်များသတိထားမိလျှင်ဆေးဝါးကုသမှုအကူအညီများရှာမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
တစ်ဦးအပြေးကိုထိပုတ်ပါအဆောတလျင်အလျင်အမြန်အကြောင်းကိုတစ်ဆယ်တစ်ဆယ့်ငါးမိနစ်အဘို့အသန့်ရှင်းသောရေများများနှင့်အတူသင်၏မျက်စိသုတ်ခြင်း။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်ဓာတုအမြဲတမ်းမျက်စိပျက်စီးမှုကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြာလော့။
3. Cyclopropylboronic အက်ဆစ်သိုလှောင်မှု
တစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ ကို C ° 20 - အကြံပြုထားတဲ့သိုလှောင်မှုအပူချိန်သည်တင်းကျပ်စွာခြောက်သွေ့အတွက်ပိတ်ထားကွန်တိန်နာ၏အဖုံးများနှင့်ကောင်းမွန်စွာလေဝင်လေထွက်တည်နေရာထားပါ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ရေအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကနေကွယ်ပျောက်သိမ်းထားဖို့အာမခံပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လုံခြုံရာဌာန၌သော့ခတ်။
4. Cyclopropylboronic အက်ဆစ်ကိုင်တွယ်
သင့်ရဲ့အသားအရေနဲ့မျက်စိနဲ့အဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မဆိုထိတွေ့မှုရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်အသုံးပြုမှုမတိုင်မီလိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာမှအာမခံပါသည်။ အခန်းဖုန်မှုန့်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိသောနေရာများအတွက်လုံလောက်အောင်အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်ရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ အောက်ပါအထောကျအကူအစီအမံစဉ်းစားကြည့်ပါ,
သင့်ရဲ့အသားအရေသို့ရတဲ့ထံမှ Cyclopropylboronic အက်ဆစ်ရှောင်ရှားရန်အကာအကွယ်ဂီယာပေါ်တွင်တင်, မျက်လုံး, ပါးစပ်နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း
အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းနှင့် eyewash အပါအဝင်အားလုံးလိုအပ်သောအရေးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ
5. Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်
6. Cyclopropylboronic အက်ဆစ်မတော်တဆအစီအမံ
သငျသညျ spillages ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
လျင်မြန်စွာတစ်ခုစုပ်ပစ္စည်းကိုသုံးပါနှင့်စွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာကစွန့်ခြင်းမပြုမီယိုဖိတ်ထစုပ်ယူထားသည်။ အခန်းထဲမှာလေခတ်နှင့်အငွေ့ minimize တစ်ခုအခိုးအငွေ့-နှိမ်နင်းအသုံးပြုပွဲချင်းပြီး clean ။ သငျသညျဒေသခံသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းသေချာပါစေ။
7. Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) တည်ငြိမ်ရေးကို
လက်ျာအပူချိန်နှင့်ဖိအားလက်အောက်တွင် Cyclopropylboronic အက်ဆစ်အလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောဓာတ်တိုးအေးဂျင့်မှ exposure အငွေ့ကိုစိတျဆိုး၏ emitting ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောရွားလှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
8. Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်း
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) စည်းမျဉ်းပြန်ကြားရေး
သင်တို့ရှိသမျှသည်ဒေသခံများနှင့် Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကဤသို့ဆို၏စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းသေချာစစ်ဆေးပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအလွန်အမင်းဒီထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပေါ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးနှင့်အခြားသူများအကြားထိုကဲ့သို့သောဘဝသိပ္ပံ, Chromatography နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်အဖြစ်ဒေသများအမျိုးမျိုးအတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Cyclopropylboronic အက်ဆစ် (411235-57-9) သာသနာကိုနှင့်စျေးနှုန်း
သငျသညျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သုတေသန application များအတွက်အမြောက်အများပမာဏအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်အမိန့်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
နံနက်။ Chem ။ Soc ။ 128, 12634, (2006)
Benard S ကို .; Neuville, L ကို .; Zhu, JJ Org ။ Chem ။ 73, 6441, (2008)
Tetrahedron လက်တ။ 43, 6987-6990, (2002)
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem, အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်Cyclopropylboronic အက်ဆစ် , ကဏ္ဍများ 1-9 ။
methyl 3- (methylamino) propanoate (24549-12-0)